warsugansomaliya.wordpress.com | warsugan iyo dhexdhexaadnimo
BARLAMAANKA JAMHUURIYADA SOOMAALIYA OO MOOSHIN KA KEENAY IN AAN LA SOO CELIN QAAR KA MID AH WASIIRADA XUKUMADII DR SAACID…BY JOURNALIST FAYSAL MUUSE ADAM..EMAIL.FAYSALHASSAN1@HOTMAIL.COM
Talaado, Janaayo 14, 2014 (HOL) — Kulan ay xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen Muqdisho ayaa lagu diiday mooshinkii wasiiradii xukuumadii Saacid laga keenay, kadib markii mooshin kaas kasoo horjeeda ay baarlamaanka horgeeyeen 12 xildhibaan. Fadhigii maanta oo ay goobjoog ka ahaayeen 218 mudane ayaa markii uu furmay waxaa xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka ay dalbadeen in…
OGAYSIIS KU AADAN JAALIYADA KHATUMO STATE EE KU NOOL WADANKA UGANDHA
JAALIYADA KHAATUMO STATE EE KU NOOL WADANKA UGANDHA WAXAY OGAYSIINAYSAA IN AY KULAN BALAADHAN QABAN DOONAAN OO LAGU DABAAL DAGAYO AAS AASKI LABAAD EE MAAMULKA KHATUMO STATE IYADOO DHAMAN JAALIYADAHA SOOMAALIYEED IYO SAFAARADA SOOMAALIDA LAGU CASUUMAY IYO HAYADO CAALAMIYA ..URURADA BULSHADA URURADA SUXUFIYIINTA SOOMAALIYED…FANAANINTA SOOMAALIYED EE REER UGANDHA….BY REPORTER FAYSAL MUUSE ADAM XASAN FAYSAL QAYAAD
Booliska magaalada New York ee ah xarunta gacancsiga ee waddanka Maraykanka ayaa shaaciyay inay u badantahay inay baxsadeen afartii nin ee qaaday weerarkii Westgate. Warbixinta cusub ee ay soo saareen booliska magaalada New York ayaa beeninaysa hadalo horay ay u jeediyeen saraakiisha dhanka ammaanka ee Kenya kuwaasoo sheegay in raggii weerarka qaaday lagu dilay iska…
Jimco, November 22, 2013 (HOL) — Wafdi ballaaran oo isugu jiray wasiirro iyo qaar ka mid xildhibaannada baarlamaanka oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka, C/kariin Xusseen Guuleed oo ay ka mid ahaayeen wasiirka kheyraadka dalka, C/risaaq Cumar Max’ed, taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo xubno kale ayaa maanta gaaray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.…
Dugsi Casri Ah Oo Adoo Jooga Gurigaaga Aad Ku Baranaysid Qur’aanka Kariimka Ah Iyo Culuumtiisa Oo Laguu Furay
Waxaa magaalada Hargaysa laga Furay Machadka Caalamul Quraan oo ah Macahad Casri ah laguna Baran doono wax kasta oo ku aadan aqoon Guud iyo Mid Diini ah. Maamulka iskuulka ayaa u sheegay Bogan in lagu baran Doono Mahcadka, arimo badan, Caalamulquraan waa Shabakad aad ka baran karto cilmiga diinta adiga oo jooga gurigaaga xafiiskaga, waxna…
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Shaaca ka qaaday in Dowladiisa ka go’an tahay Cirib tirka Al-Shabaab Iyadoo Baryahanba la Ciirciiraysa Khilaafka isaga iyo Raysalwasarihiisa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa tacsi u direy dhammaan dadkii waxyeelada ka soo gaartey qaraxii maanta ka dhacay saldhiga Booliiska ee Beledweyne. Ciidamada Dowladda iyo maamulka Gobolka Hiiraan ayaa baaritaan wada oo ku aadan sida falka u dhacay iyo khasaaraha inta uu la egyahay iyo sidii dabagal loogu sameyn lahaa sababta…
November 19, 2013 in Home, warka.
Daawo Sawirada Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Saldhiga Booliiska Magaalada Baladweyn
Wararka naga soo gaarayo Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ay sii kordheen qasaaraha ka dhashay weerar Ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay Saldhiga Booliiska Magaaladaasi. Gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay afaafka hore ee Saldhiga Booliiska iyadoona xiligaasi kadib rag hubeesan oo katirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen…
HEES AAD U XIISO BADAN TAABANAYSANA XAQIIQDA RAGA QAR UU HABLAHA KULA DHAQMO GABDHAHANA U AH WACYI GALIN.
Heestan ayaa waxay tahay wacyi galin iyo xaqiiq marmarka qaar raga ka dhacda .Heestan ayaa waxa erayadeeda ka mida haygeen hotelada haygalafano hayseejin gabadhnimo markaad iga gungaadhana durba gooso hay odhan. Wariye Axmed faandhe
November 19, 2013 in Home, suugaanta.
Madaxweyne Xasan oo u daawasho tagay Garoonka K/cagta Koonis.
Madaxweyne Xasan oo u daawasho tagay Garoonka K/cagta Koonis, isaga ay ka muuqto qosol uu waligiiba uu watay. Inkasta oo khilaaf xoogan uu ka jiro xukuumadiisa hada waxaad moodaa inaysaba dhib ku hayn xukuumada saacid ee la doonayo in la rido maalmaha soo socda. wariye.Axmed Faandhe
November 19, 2013 in Ciyaaraha, Home.
Daawo+Shacabka Reer laascaanood oo Deeqdii u Horaysay Maanta Diray si ay Dadka Masiibadu ku Habsatay Deganada Gabalada Bari iyo Nugaal dhibka ula qaybsadan
Gudidii u xilsaarnayd gargaarida dadka duufanugu halakeeyen gobalada bari iyo nugaal ee gobalka sool magala madaxdiisa lascanood ayaa maanta ka anbabaxay magalada laascanod iyaga oo deeqdi u horaysay u qaaday dadka dhibku so ogadhay deeqda oo lacag iyo agabkaleba isugu jirta Q.w.Axmed Faandhe
Qaraxyo Dhowr ah oo Caawa ka Dhacay Magaalada Boosaaso iyo Xabsiga Dhexe ee Gaal-shiraha oo la weeraray
Iska-hor-imaad aad u xooggan oo muddo hal saac ku dhow socdey ayaa caawa ka dhacay xabsiga dhexe ee Gaal-shire oo ku yaal waqooyiga magaalada Boosaaso. Taliyaha xabsiga la weeraray Shire Siciid Maxamed oo Hiiraan Online khadka telefoonka ugu warramay, ayaa sheegay in weerarka ay soo qaadeen dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab oo tiradooda uu ku sheegay…
November 10, 2013 in Home, warka.
mo farah endorses female british somali hopefull
Amina Ali gains support of popular Somali-born British Olympic champion in fierce selection campaign taking place in Harrow East this month. A WOMAN hoping to become Britain’s first female MP of Somali heritage has received the backing of Team GB’s golden Olympic hero Mo Farah. Amina Ali, founder of the Labour Friends of Somali who…
November 10, 2013 in Home.
Qarax weyn oo loo adeegsaday gaari la dhigay iridka hore ee Hotelka Maka Al-Mukarama ayaa caawa ka dhacay halkaasi, iyadoo qaraxan inta uusan dhicin ka hor saacad gudaha Hotelka uu ka dhacay qarax yar oo uu sameeyay Laptop uu watay nin la sheegay in uu is qarxin rabay. Qaraxan oo ahaa mid aad u xoogganaa…
nin soomaaliyeed oolagu xidhay dalka talyanaiga
Qaar ka midh dadkaas soo badbaaday ayaa aqoonsaday in uu yahay ninkii soo raray doonta degtay. Dadka halkaas ku dhintay waxay u badnaayeen Soomaali iyo Eritreyaan. Talyaaniga ayaa dadkii halkaas ku dhintay u sameeyay aas qaran. Tobonaan ruux ayaa sand walbo ku dhinto badda iyagoo doonayo inay gaaraan dalka Talyaaniga. wariye:Ahmed Mohamed Ahmed
xalay oo ay taariiqda tahay 2/11/2013 waxaa gabar ugu dhalatay shabeelada hoose gaar ahaan Buulo Mareer Axmad xaaji cali iyo hani cabduqaadir macalin maasha alaah baanu leenahay dhamaantayo gaar ahaan waxa halkan ka hanbalyanaya cabdiqadir macalin maxamoud oo ah awoowaha gabadha yar waxaana uu leeyahay awoowe soo bar baar tii diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda wax ku tarto alaha…
November 3, 2013 in Faalooyinka iyo Arimaha bulshadda, Home.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed SheekhCusmaan Jawaari ayaa ugu hambalyeeyey shacbiga Soomaaliyeed guud ahaanmeel walba oo ay caalamka ka joogaan Munaasabadda Ciida Carafo (CiidulAdxa). Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa hadalkiisa ku bilaabay “Mahad oo dhanAlle ayaa iska leh, Alle ayaa weyn, dhammaan Shacbiga Soomaaliyeed meelwalba oo ay aduunka kaga noolyihiin iyo Xildhibaannada Golaha Shacabkawaxaan ugu…
October 24, 2013 in Home.
Inkastoo muuqaalo laga helay kaamirooyinkii ku xirnaa xarunta Westgate ay muujiyeen ciidamada Militariga oo wata baco alaabo ay ku jirto ayaa Taliyaha ciidamada militariga dalka Kenya General Julius Karangi uu ku adkaystay in ciidamada militariga Kenya aysan waxba xadin markii uu socday weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate. Gen Karangi oo su’aalo ay waydiiyeen…
October 24, 2013 in Home, warka.
Isniin, October 21, 2013(HOL) :- Waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose lagu soo gabagabeeyay wadahadallo qaatay mudo laba maalmood ah oo u dhexeeyay masuuliyiinta maamulka KMG ee Jubba iyo dowladda Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ay wadahadalladani goobjoog ka ahaa xubno ka socday ururka Midowga Afrika. Kadib dood dheer iyo is fahanwaa ku aadan…
October 23, 2013 in Home, warka.
Koox hubeysan ayaa maanta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxay toogasho ku dhaawaceen weriye Maxamed Maxamud Timacadde oo ka tirsan shaqaalaha TV-ga Universal.
Koox hubeysan ayaa maanta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxay toogasho ku dhaawaceen weriye Maxamed Maxamud Timacadde oo ka tirsan shaqaalaha TV-ga Universal. Weriye Timacade ayaa la dhaawacay xilli uu watay baabuur, waxaana la sheegayaa in nimanka hubeysan ay ku dhufteen ilaa lix xabbadood kadibna ay baxsadeen. Weriyahan ayaa haatan lagu daweynayaa cisbitaalka Madina ee…
Sida loogo Ciiday wadanka Norway gaar ahaan magaalada Bodo ee gobalka nordland.Sawiro+vedio.
waxaa saaka si guud looga ciidaya wadanka Norway ciida ciidul Udxada oo dhamaan gobalada wadanka musliminta ku noolay ay si guud igu soo bexen bananada iyo musaajiadada goobaha ay dagan yihiin ku yaala. waxaa si sidaa lamida looga ciiday magalada bodo ee caasimada goblaka Nordland ee wadankan norway iyada oo dhamaan dadka ku dhaqan gobalkan…
October 16, 2013 in Home, warka.